အတတ်ပညာ China 1325 linear ATC စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |JCUT
1. ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အကွက်ရိုက်ခြင်း၊ ဖောက်ထွင်းခြင်း၊ ထွင်းထုခြင်း (ရိုးရှင်းသော ပုံစံထုတ်ခြင်း)။လုပ်ငန်းစဉ်လေးရပ်ကို ကက်ဘိနက်ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် ကက်ဘိနက်တံခါးထွင်းခြင်း နှစ်ခုလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အဆင့်မြင့် အလိုအလျောက် ကိရိယာ ပြောင်းလဲမှု ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြု၍ ပရိုဂရမ်သည် လူကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု မရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ချည်မျှင်များစွာသည် တပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
2. လေဟာနယ် စုပ်ယူမှုဇယားကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ လေဟာနယ်ပန့်သည် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိ ပစ္စည်းများကို ကောင်းစွာစုပ်ယူနိုင်ပြီး စုပ်ယူမှုအားကောင်းသည်။အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့် ပန်းကန်ပြားကို ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
3. ဆာဗာမော်တာ၊ တိကျမှုမြင့်မားသော ဂီယာနှင့် တင်သွင်းလာသော rack drive တို့ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ဆူညံသံနည်းသော၊ မြန်ဆန်သောအမြန်နှုန်းနှင့် တည်နေရာတိကျမှုမြင့်မားသော စက်ကို တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်စေသည်။၎င်းပြင် အလိုအလျောက် ချောဆီစနစ်သည် ဆလိုက်ဝက်အူလမ်းညွန် ရထားလမ်း၏ ချောဆီထွက်ရှိမှုနှင့် စက်၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ရှည်ကြာစေရန် အချိန်နှင့်အညီ အလိုအလျောက် ချောဆီပေးနိုင်သည်။
4. စက်ကိရိယာသည် အသေးစားပုံပျက်ခြင်း၊ တောင့်တင်းကောင်းမွန်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားခြင်း၊ တာရှည်ခံခြင်းနှင့် ရေရှည်အသုံးပြုခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် မြင့်မားသောအပူချိန် အပူဒဏ်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ကုသခြင်းအတွက် ဧရာမ gantry ဖရိမ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးပါသည်။ ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ အသုံးအနှုန်း။
5. အဆင့်မြင့် အလိုအလျောက် ကိရိယာ ပြောင်းလဲမှု ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြု၍ ပရိုဂရမ်သည် လူကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ချည်မျှင်များစွာသည် တပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
6. မတော်တဆမှုတစ်ခု (ဓားကျိုးခြင်း) သို့မဟုတ် နောက်နေ့တွင် လုပ်ဆောင်မှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် သေချာစေရန် ပါဝါပိတ်မှတ်ဉာဏ်ကို အသုံးပြုခြင်း။
inline tool change machining center သည် panel ပရိဘောဂများ၊ ကက်ဘိနက်တံခါးများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊ စိတ်ကြိုက်ပရိဘောဂများနှင့် တံခါးလုပ်ငန်းစသည့် သစ်သားလုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်သည်။စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သော ပန်းကန်ပြားများ- အလွှာပေါင်းစုံ၊ အမှုန်အမွှားဘုတ်များ၊ ဂေဟဗေဒဘုတ်များ၊ သိပ်သည်းဆဘုတ်များ၊ လှိုင်းဘုတ်များနှင့် အခြားဘုတ်ပြားများ။အဆိုပါစက်ကို panel ပရိဘောဂများ၊ ဗီရိုဗီရိုများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊ စိတ်ကြိုက်ပရိဘောဂများ၊ ကွန်ပျူတာစားပွဲများ၊ သစ်သားစပီကာများ၊ သစ်သားမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများစသည်ဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Longteng တတိယမျိုးဆက် R10 linear ATC + Four Heads cnc router
1220*2440*200mm (အရှည် 2800 စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်)
ထိုင်ဝမ် LNC စနစ်
ယခင်- ATC သစ်သား cnc 1325
နောက်တစ်ခု: သစ်သားရောက်တာ atc
Cnc Router ဖြတ်တောက်ခြင်း အလူမီနီယမ် 6060 ထုတ်လုပ်သူ